Category abdul – Xogsoor News Network
By abdul On Tuesday, April 14th, 2020
Booliska dalka Kenya ayaa sheegay in Al-Shabaab ay sare u qaadeen afduubka ay ka geystaan gudaha dalka Kenya, inta badana ay beegsadeen shaqaalaha gargaarka ee ka howlgala qeybo kamid ah dalkaasi, gaar ahaan gobolka More...
Puntland: Dad looga shakiyay Coronavirus oo la karantiilay
Guddiga dowladda Puntland u qaabilsan ka hortagga iyo wacyi-gelinta xanuunka Coronavirus ayaa xaqiijiyay in shalay gudaha Puntland lagu karantiilay laba ruux oo looga shakiyay cudurka COVID-19 inkastoo aysan shaacin More...
Wararka aan ka heleyno duleedka Magaalada Gaalkacyo ee Xarunta Gobolka Mudug ayaa waxa ay sheegayaan in geed ku yaalla halkaas gelinkii dambe ee shalay lagu arkay Nin qoorta xarig ugu xiran yahay oo Meydkiisa kasoo More...
Ra’iisul Wasaare Khayre oo xukuumadiisa ku amray in ay.
Ra’iisul wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Xassan Cali Khayre, ayaa amar ku bixiyay in loo gargaaro dadka danyarta ah ee uu saamaynta xooggan ku yeeshay xanuunka Coronavirus. Ra’iisul wasaare Khayre More...
By abdul On Monday, April 13th, 2020
Tifaftirahii TV ga Qaranka Soomaaliya oo is-casilay kadib isku day dusha loogu saari.
Tifaftirahii Telefishinka Qaranka Soomaaliya SNTV, Feysal Muuse ayaa maanta shaaciyay inuu is casilay, kadib 3 sano oo uu howshan hayay. Feysal Muuse ayaa sheegay in ujeedada is-casilaaddiisa asalkeedu More...
Rajo wacan oo laga muujiyey in la helo talaal looga hortago Caabuqa Korona feyrus (COVID-19).
Talaal loogu talagalay la dagaalanka Coronavirus ayaa lagu wadaa inuu diyaar noqdo bisha Sebtembar sida laga soo xigatay aqoonyahano ka howlgasha Jaamacadda Oxoford oo ah jaamacada ugu weyn dalka Britain Professor More...
Madaxweyne Deni oo Hogaan cusub u magacaabay gobolka.
Madaxweynaha dowladda Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa maanta oo Isniin ah maamul cusub u magacaabay gobolka Nugaal. Dikreeto ka soo baxday xafiiska madaxweynaha Puntland ayaa guddoomiyaha gobolka Nugaal More...
DEGDEG: Dagaal hub kala duwan la isku adeegsanaayo oo ka Socda magaalada.
Wararka aanu hadda ka helayno magaalada Boorama ee gobolka Awdal, ayaa sheegaya in bariga magaaladaasi uu saaka ka qarxay dagaal xoogan. Dagaalkan oo saaka ku soo waa-bariisteen dadka reer Boorama, ayaa waxa uu More...
DEG DEG:Xiisad Colaadeed oo ka aloosan G.Sanaag iyo Hub urursi ka socda Ceerigaabo.
Wararka ka imaanaya magaalada Ceerigaabo ee xarunta gobolka Sanaag ayaa sheegaya in xiisad culus ay maanta ka taagan tahay magaaladaasi Ceerigaabo iyo deegaanka Waqdariya ee waqooyiga gobolka Sanaag, kadib dagaalkii More...
Madaxweynaha Maamulka Galmudug oo wacad kumaray in uu.
Madaxweynaha Maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoor Qoor oo xalay ka hadlay munaasabada xilka uu kula wareegayay ayaa waxaa uu sheegay in maalmaha soo socda uu aoo magacaabi doono gole wasiiro oo tayo leh. Mr More...